Usoro ọrụ - Popular Jewelry
A na-ejikwa weebụsaịtị a Popular Jewelry. Na saịtị ahụ, okwu "anyị", "anyị" na "anyị" na-ezo aka Popular Jewelry. Popular Jewelry na-enye weebụsaịtị a, gụnyere ozi niile, ngwá ọrụ na ọrụ dị site na saịtị a, gị onye ọrụ, na-adabere na ịnakwere nke okwu niile, ọnọdụ, atumatu na ọkwa dị na ebe a.
Ọ nweghị ikpe Popular Jewelry, ndị nduzi anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ, ndị na-enye ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ikikere nwere ike ịdaba maka mmerụ ọ bụla, ọnwụ, nkwupụta, ma ọ bụ ihe ọ bụla, kpọmkwem, ihe ọ bụla, , gụnyere, na-enweghị njedebe uru efu, ego furu efu, ego furu efu, enweghị data, ụgwọ mgbapụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri emebi, ma ọ bụ na-adabere na nkwekọrịta, ahụhụ (gụnyere ileghara anya), ọrụ siri ike ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, na-ebili site n'iji nke ọ bụla ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla a na-eji ọrụ, ma ọ bụ maka ihe ọ bụla ọzọ metụtara na ụzọ ọ bụla iji ojiji ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla, gụnyere, ma ọ bụghị njedebe na, ọ bụla njehie ma ọ bụ ihe ọ bụla na ọdịnaya ọ bụla, ma ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụ mmebi ọ bụla ụdị obiọma sitere n'aka ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla (ma ọ bụ ngwaahịa) ezitere, transmitted, ma ọ bụ nke ọzọ mepụtara site na ọrụ ahụ, ọ bụrụgodị na ọ gwara ha ka ha nwere ike ime ya. N'ihi na ụfọdụ na-ekwu ma ọ bụ ndị ọchịchị anaghị ekwe ka mwepụ ma ọ bụ njedebe nke ọrụ maka ọdachi ma ọ bụ ọdachi, na ụlọnga ma ọ bụ ikike ndị a, ibu ọrụ anyị ga-ejedebe na iwu kachasị oke.
Ị kwenyere na ị ga-akwụ ụgwọ, chebe ma jide adịghị njọ Popular Jewelry na nne na nna anyị, ndị mmekọ, ndị mmekọ, ndị mmekọ, ndị isi ọrụ, ndị nduzi, ndị ọrụ, ndị ọrụ ngo, ndị ọrụ ikikere, ndị na-ahụ maka ọrụ, ndị na-ere ahịa, ndị na-azụ ahịa, ndị ọrụ na ndị ọrụ, enweghị nsogbu site na nkwanye ma ọ bụ arịrịọ ọ bụla. n'ihi na ma ọ bụ na-esite na mmebi iwu gị ma ọ bụ ihe ndị ha na-etinye na ntinye aka, ma ọ bụ mmebi nke iwu ọ bụla ma ọ bụ ikike nke onye ọzọ.
Usoro ọrụ ndị a yana nkwekọrịta ọ bụla dị iche iche anyị nyere gị maka ị ga-achịkwa ya ma rụọ ya dịka iwu nke 255 Canal Street New York New York US 10013.
A ga-ezitere anyị ajụjụ gbasara usoro ọrụ iji gaa na info@popular.jewelry